PP, PE, ABS, PVC matevina amin'ny fantsom-panafody plastika - China PP, PE, ABS, mpamatsy lozisialy plastika mpamatsy, mpanorina –Jwell
Ny takelaka matevina PP, vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana ary ampiharina betsaka amin'ny indostrian'ny simia, indostrian'ny sakafo, indostrian'ny fanoherana ny fikajiana, indostrian'ny fitaovana malala-tontolo iainana, sns.
PP tsipika extrusion takelaka matevina 2000mm sakany dia andalana vao novolavolaina izay ny tsipika mandroso sy miorina indrindra ampitahaina amin'ireo mpifaninana hafa.
Ny takelaka PE dia ampiharina betsaka amin'ny indostrian'ny angovo simika sy herinaratra. Ny takelaka HDPE, fantatra amin'ny anarana hoe plastika injeniera, dia ampiasaina amin'ny mekanika
ary ny fitaovana simika ary koa ny rindrina peratra holly gilasy.
Ny takelaka matevina ABS dia be mpampiasa amin'ny fitaovana ao an-trano, elektronika, fonosana, fitaovana fitsaboana.
Ny takelaka matevina PVC henjana dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny simika, lasantsy, elektroplating, fitaovana fanadiovan-drano, fitaovana milamina amin'ny tontolo iainana, trano fanaovan-jiro sy dokam-barotra, sns.